भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दण्डहीनताको अन्त्य | चितवन पोष्ट
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दण्डहीनताको अन्त्य
हाम्रो देशमा आज र हिजो लागेको घातक रोग जसले राष्ट्रलाई संसारमा तल्लोस्तरमा पु¥याएको छ र झनै तल झार्दैछ, त्यो हो– भ्रष्टाचार । भ्रष्टाचार पुँजीवादी कानुनले लुट्न दिएको सीमाभित्र पनि नअटाएर कानुन मिचेर गरिएको लुट हो । हरेक देशमा कानुन उलंघन गरेर अतिरिक्त सम्पत्ति जम्मा गर्ने मात्रा जति हुन्छ त्योभन्दा कैयन् गुणा बढी लुट कानुन पालना गरेर हुन्छ । आर्थिक हिनामिना, असामाजिक र अनैतिक क्रियाकलाप र अन्य भ्रष्ट गतिबिधि जसको परिणामस्वरुप राष्ट्रमा अनैतिकता पैदा हुन्छ, अर्थात् कुनै पद वा दायित्व लिएको व्यक्तिले आफ्नो अधिकार र हैसियतलाई दुरूपयोग गरी अनुचित ढङ्गबाट आर्थिक हिनामिना गर्ने काम नै भ्रष्टाचार हो ।
यो रोग यति घातक भएको छ कि देशको हरेक तह र तप्काको प्रगतिमा ठूलै बाधक बनिसकेको छ । भ्रष्टाचारलाई पुरूषार्थ मान्ने सामाजिक मान्यताले गर्दा पनि भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । यसको व्यापकता र साथै रोकथामको प्रायः शून्यताको स्थिति हेर्दा यसले एउटा घातक महामारीको रुप लिइसकेको छ । अझै पनि यसको रोकथाम नगर्ने हो भने, कतैबाट चासो पनि नदिने हो भने जसले हामीलाई गौरवका साथ बाँच्न दिने छैन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारी तवरबाट संस्थाहरु गठन भएका छन् । जस्तैः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र । अख्तियारअन्तर्गतका शाखाहरु क्षेत्रीय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा पनि रहेका छन् । यी संस्थाहरु हात्तीको देखाउने दाँतमात्र भएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित संस्थाहरुमा नै भ्रष्टाचार छ भने उसले अरुलाई नियन्त्रण गर्ने सम्भावना रहँदैन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सर्वप्रथम मूल सङ्लो हुनुपर्छ । देशको राजनीतिको पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रिय भूमिका रहन्छ । मुलुकको बाग्डोर सञ्चालन गर्ने नेता र उच्चपदस्थ प्रशासकहरु सदाचारी भए भने देशबाट भ्रष्टाचार स्वतः भाग्दछ । यहाँ त जो रक्षक उही भक्षक भएर मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा गाडिएको छ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नु त कता कता संरक्षण दिने नेताहरुको प्रवृत्ति छ । समाजमा भ्रष्टाचारको आयतन पनि यसैअनुसार निर्धारित भएको पाइन्छ । भ्रष्टाचार कारणले भन्दा प्रवृत्तिले हुन्छ । यो शक्ति, अवसर, ओहोदा, इज्जत र सम्पत्तिको लोभमा गरिन्छ । यो मनोविज्ञानबाट पनि लक्षित हुन्छ नैतिकता कम भएको समाजमा ।
भ्रष्टाचारका अन्य कारणहरु पनि छन्— पहिलो, आर्थिक उतारचढाव, मूल्य वृद्धि, मौद्रिक अवमूल्यनका कारण जीवन प्रणाली महँगो भएर भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउन सक्छ । राजनीतिक अस्थिरता बढ्दा साथसाथै भ्रष्टाचारले पनि उर्वरभूमि पाउने गर्छ । नेतृत्व सक्षम नहुँदा पनि भ्रष्टाचार बढ्छ भने हामीकहाँ बारम्बार हुने राजनीतिक घटनाक्रम, महँगो चुनाव प्रणाली र राजनीतिक संस्कारहीनताले यसलाई प्रणालीबद्ध गरेको छ । सामाजिक प्रथा–परम्पराले कायम गरेको मूल्यवृत्तिअनुसार पनि भ्रष्टाचार हुन्छ । समाजमा धनसम्पत्तिको अति कदर हुन्छ भने भ्रष्टाचार बढ्छ । नैतिकताको मूल्य बढेमा भ्रष्टाचार घट्छ । भ्रष्टाचारले सामाजिक मान्यता पाएकाले हामीकहाँ छिटो–छिटो धनी हुने प्रवृत्तिलाई उकेरा मिलेको छ । दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकहरुमा अनिश्चित आर्थिक वातावरणका कारणले पनि नजानिँदोरुपमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । समाजमा विलासिताको सपना देख्नेहरुले यसलाई अरु मलजल गरेका छन् ।
विश्वव्यापीकरणका साथ बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विस्तार, आर्थिक सञ्जालीकरण र गैरसरकारी क्षेत्रको क्रियाकलापको विस्तारले पनि
भ्रष्टाचारलाई उत्प्रेरित गरिरहेको छ । राज्यका औपचारिक संस्थाहरु कमजोर भएमा सीमित स्वार्थको माखेसाङ्लोमा राज्यप्रक्रियालाई दोहन गर्न सकिन्छ । यस प्रकारका शासकहरुलाई दण्डित गर्ने नागरिक आवाज प्रणाली पनि हुँदैन, पैसा वा प्रभावका आधारमा पद किन्नेहरुसँग उनीहरुको नेक्ससले काम गर्दछ र जनताको कर, प्राकृतिक स्रोत र वैदेशिक सहायतासमेत आफूहरुको पक्षमा उपयोग हुन पुग्छ । उनीहरु ‘फुटाऊ र शासन गर’ को सिद्धान्त पनि अख्तियार गर्दछन् । निष्ठा र नैतिकता कम भएका राजनीतिज्ञ स्वच्छभन्दा भ्रष्ट र योग्यभन्दा अनुचर व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारी दिन रूचाउँछन् र जिम्मेवारी पाउनेले जिम्मेवारीलाई अवसरका रुपमा उपयोग गर्छन् । योग्य र इमानदारबाट भयभीत हुने रोग नै हुन्छ उनीहरुमा । परिणामतः राज्यका संस्थाहरु अरु कमजोर हुन्छन् र भ्रष्टाचार अरु मौलाउने गर्दछ । उनीहरुबाट हुने निगरानी कार्यमा पनि एकरुपता नहुने हुन्छ । भ्रष्टहरु इमानदारमाथि राज गर्न थाल्छन्, उल्टो सदाचारको शिक्षा दिन पछि पर्दैनन् ।
नेपाली समाजमा सकारात्मक सोच हराउँदै गएको छ । कसैले राम्रो गर्छ र कोही इमानदार छ भन्ने विश्वास अर्कोमा छैन । राम्रो कुरा कतै समाचारको विषय बन्दैन, सुन्ने संयम राख्ने प्रवृत्ति पनि देखिँदैन । सकारात्मक सोच घरपरिवार, समाज, समुदायदेखि राज्य व्यवस्थासम्म पु¥याउनु आवश्यक छ । घरमा चुलोचौको गर्ने गृहिणीले विनापसिना कुनै कुरा उनको श्रीमान्ले नल्याओस् भन्ने भावना राख्नुपर्छ । बच्चाले चकलेटको र श्रीमतीले गहनाको स्रोत खोजेमा भ्रष्टाचार स्वतः घट्छ । इमानदारले सामाजिक प्रतिष्ठा पाउने अवस्था समाजले सिर्जना गर्नुपर्छ र राज्य प्रणाली पनि निष्पक्ष हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई उसको विवेकको प्रायश्चित गराउन सामाजिक बहिष्कारको रणनीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । आमनागरिकको सामाजिक सुरक्षा र सेवा प्रत्याभूति गर्न सतत् एवम् सबल हुनुपर्छ । यसर्थ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्पूर्ण सामाजिक प्रयास नै आवश्यक हुन आउँछ, न कि ससाना एक–दुई कार्यमात्र ।
त्यस्तै, राजनीतिक संरक्षण, अन्तर्र्रािष्ट्रय प्रवृत्ति, आर्थिक उदारीकरणजस्ता कुराले पनि भ्रष्टाचारको आयतन, प्रवृत्तिलाई प्रत्यक्ष–परोक्षरुपमा प्रभाव पारेको हुन्छ । प्रणालीभित्र अवसरको न्यायिक वितरण नभएमा पनि भ्रष्टाचार बढ्छ । राज्य प्रणालीमा योग्य र इमानदार व्यक्तिहरु प्रवेश गर्दैनन् भने पनि यसबाट अन्ततः प्रणाली बिगार्न नै योगदान पुग्छ । विगतको बन्द राजनीतिक व्यवस्थामा भ्रष्टाचार बढ्नु स्वाभाविक थियो, तर अहिले समाजमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग बढ्दै गएको छ, नागरिकहरुमा चेतनाको स्तर पनि बढेको छ । निगरानी निकायको सक्रियता पनि बढेको छ, तैपनि जनताले महसुस गर्ने हदमा भ्रष्टाचार घट्न सकेको छैन ।
निर्णय गर्दा पारदर्शीरुपमा गर्ने, मर्का पर्ने पक्षलाई संलग्न गराउने र सहयोग–सल्लाह व्यवस्थापनका प्रत्येक चरणमा लिँदा जिम्मेवारीप्रति सचेतता बढ्न गई भ्रष्टाचार घट्न जान्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा एसियाली देशको अध्ययनबाट के प्रमाणित भएको छ भने राजस्व आर्जन गर्ने निकायमा साना कर्मचारीको संलग्नता बढी हुन्छ भ्रष्टाचारका लागि । त्यसैले, यस्ता कार्यालयमा पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र निगरानीका लागि कडा कानुनी संयन्त्र आवश्यक छ भने खर्च गर्ने कार्यालयका भ्रष्टाचारका पात्रहरुमा श्वेतपोशी हाकिमदेखि मन्त्रीसम्मको बाहुल्य रहन्छ । त्यस्तै, खरिद–बिक्रीजस्ता कार्यमा साना–ठूलोको सामूहिक संलग्नता हुने हुँदा यहाँ ऐन–नियम, संयन्त्र र आचरण सबै पक्ष प्रयोग गरिनुपर्छ । तर, नीतिगत तहमा केवल श्वेतपोशी अपराध हुने हुँदा यसको प्रमाण पनि नहुने तर देश र समाजले ठूलो लागत चुकाउनुपर्ने भएकाले नैतिकता र आचरणमा शुद्धता बढी आवश्यक छ ।
त्यस्तै, सबै सार्वजनिक ओहोदाका पदहरुको कार्र्यिववरण कानुनले नै गर्ने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । निर्णय गर्दा स्वविवेक र तजबिजी अधिकार प्रयोग हुन नसक्ने गरी कानुनले नै निर्दिष्ट प्रक्रिया उल्लेख गरिदिनुपर्छ । राजनीतिक आचरण शुद्ध हुनुपर्छ, साथै राजनीतिकरुपमा सहमतिको आचरण बनाई चुनाव खर्च न्यून गर्ने, राजनीतिलाई आपराधीकरण हुनबाट हटाउनेतर्फ सहमति भएमा भ्रष्टाचारले उर्वरभूमि पाउँदैन । राजनीतिमा योग्य र इमानदारहरुको वृत्ति बढोत्तरी सुनिश्चित हुनुपर्छ । स्थिर राजनीतिक वातावरण र सक्षम नेतृत्व रहनुपर्छ । त्यस्तै, प्रशासनिकरुपमा भ्रष्टाचार उपर गरिनुपर्ने कारबाहीको मात्रा र आयतन बढाइनुपर्दछ । संस्थाले स्वतन्त्ररुपमा काम गर्नका लागि आचरण शुद्ध भएका र नैतिकतालाई अनुसरण गर्ने व्यक्तिहरु मात्र यस्ता निकायमा राखिनुपर्दछ ।
नैतिक आधारशिला संरक्षण गर्ने व्यक्ति नै अनैतिक र राजनीतिकरुपमा आग्रही भएमा शाहीकालीन न्याय कायम हुन गई सदाचार प्रणालीको अर्को उपहास हुनपुग्छ । अदालती कारबाही पनि छिटो हुनुपर्छ । ढिलो भएमा चलखेलको सम्भावना बढ्छ र भ्रष्टाचारले हौसला पाउँछ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सर्वप्रथम सम्पत्तिको सीमा तोकिनुपर्छ । नैतिक शिक्षा दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई बुई बोकेर हिँड्ने राजनीतिक चरित्रको अन्त्य हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित संस्थालाई न्यायिक अधिकार दिनुपर्छ । जनतालाई परावलम्बी होइन, स्वावलम्बी र अनुशासित बनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही र सदाचारीलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ । अनिमात्र, देश भ्रष्टाचारमुक्त हुन सक्दछ, अन्यथा भ्रष्टाचारको एक नम्बरमा मुलुक पुग्न सक्छ ।
सन् २००६ देखि २०१८ सम्मको तथ्यांकअनुसार २००७ सालमा नेपाल १३१औँ भ्रष्ट मुलुकको ट्याग लगाउन सफल भएको थियो । २००८ मा घटेर १२१औँ स्थानमा झ¥यो । त्यसैगरी, २०११ सालमा ह्वातै बढेर १७४औँ भ्रष्ट मुलुकमा परिणत भयो । हालको १७० मुलुकमध्ये टीआइको अन्तिम तथ्यांकअनुसार २०१६ मा १३१औँ मुलुकमा पर्न गयो । हाल नेपाल, दक्षिण एसियामा धेरै भ्रष्टाचार हुने देशको तेस्रो स्थानमा परेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारको अवधारणा सूचक सीपीआईले नेपाल १ सय ८० देशमध्ये १ सय २४औँ स्थानमा रहेको देखाएको हो । गत वर्ष सुशासनको दृष्टिले १ सय २२औँ मुलुक बनेको नेपाल यो वर्ष २ स्थान तल झरेर १ सय २४औँ भएको हो । १७५ मुलुकमध्ये नेपाल १२६औँ स्थानमा छ । कुनै पनि मुलुकको सूचक ५० भन्दा तल रहनु त्यहाँ गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारजन्य जोखिम छन् भन्ने अर्थ लाग्छ ।
भ्रष्टाचारलाई तथ्यांकमा भन्दा पनि तथ्य र अनुभूतिमा हेर्नुपर्छ । सेवाग्राहीले सेवा लिन जाँदा यसका क्यू, काउन्टर र गेटमा कसरी सेवा पाए र उनीहरुमा कस्तो अनुभूति भयो, त्यसबाट मापन गरिनुपर्छ । तर, अनुदारवादीले भन्ने गरेझैँ यो गणतन्त्र आएपछिमात्र बढेको होइन, पञ्चायत र शाहीकालमा बडाहरुका विषयमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन थियो, न पारदर्शिता नै थियो । अहिले जनता बोल्न पाउँछन्, पारदर्शिता पनि बढेको छ । त्यसैले, भ्रष्टाचार हुनेबित्तिकै वा हुने सम्भावना हुँदा सर्वसाधारण प्रतिक्रिया जनाउन सक्षम भएका छन् ।
यी यथार्थ र निष्कर्षका आधारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु साह्रै साहसिक कदम र यसका लागि ठूलो जोखिम उठाउनुपर्ने पक्का छ । त्यो प्रयास र व्यवस्था समाजका सबै अंग र अवयवबाट हुनुपर्छ । यसर्थ, यो साहसिक रणनीतिक अभियान नै हुनुपर्छ । यो समग्र र बृहत् रणनीतिको हुनुपर्छ, धर्मयुद्ध लडेजस्तै । किनकि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने थुप्रै सम्भाषण, नियम–कानुन, संयन्त्र र दस्तावेज प्रकाशमा आइसकेका छन् । तैपनि, समाजले यसलाई पचाइरहेको छ । भ्रष्टाचार पूर्ण हटाउन सकिने विषय नभए पनि घटाउन सकिने विषय भने हो । यसका लागि प्रमुखरुपमा केही उपाय सिफारिस गर्न सकिन्छ ।
भ्रष्टाचार झन्झन् भयंकर हुँदै जानुको एउटै कारण छ, त्यो हो– राज्यले नै दशकौँदेखि फस्टाउन दिएको ‘दण्डहीनता’ । जब सबै राज्य गर्ने तह र तप्का, अधिकांश कर्मचारीतन्त्र, सारा पेसागत समूहलगायत जीवनका हरेक तहमा यो भ्रष्टाचार छ, तब यसलाई नियन्त्रण गर्ने कसले ? राज्यका शक्ति भएका कुनै पनि अंग भ्रष्टाचारमुक्त छैनन् । किन दण्डहीनता हामीकहाँ यस्तो जटिल अवस्थामा छ ? जब कि, यो अन्त हुनासाथ यो रोगबाट हामी धेरै हदसम्म मुक्ति पाउने थियौँ । किन दण्ड पाउनुपर्नेहरु पाउँदैनन् ? पुँजीवादी व्यवस्थाले फेर्ने स्वास नै भ्रष्टाचार हो । पुँजीवादमा भ्रष्टाचार किन भयो भने पुँजीवाद भनेकै पुँजीको आडमा मजदुरहरुको कमाइको ठूलो हिस्सा कब्जा गर्ने शोषणमूलक अर्थात् भ्रष्ट व्यवस्था हो ।